आईपीएल कपाल हटाउन घर प्रयोग को रहस्य （तीन） कम्पनी समाचार-शेन्जेन नो स्मार्ट स्मार्ट निर्माण प्रौद्योगिकी कम्पनी लिमिटेड
आईपीएल कपाल हटाउने घर को रहस्य （तीन）
समय: 2020-06-12 हिट्स: 3
कपाल हटाउने उपकरण प्रयोग गरेपछि हामीले केमा ध्यान दिनु पर्छ
म विश्वास गर्छु कि साथीहरू जसले प्राय: कपाल हटाउने उपकरण प्रयोग गर्दछन् त्यस्ता प्रश्नहरू हुन्छन्। छालाको केहि क्षेत्रहरू रातो हुनेछन्, र यसले केही दुखाइ र खुजली महसुस गर्दछ। त्यसैले म केहि छाला हेरचाह उत्पादनहरू मेटाउन चाहन्छु, तर मलाई चिन्ता छ कि यसले छालालाई चोट पुर्याउछ। त्यसोभए केश हटाउने उपकरणको प्रयोग पछि क्षतिग्रस्त छालाको मर्मतको गति बढाउन छाला हेरचाह उत्पादनहरू प्रयोग गर्न चाहन्छौं भने हामीले केमा ध्यान दिनुपर्दछ।
सबैभन्दा पहिले, सौन्दर्य प्रसाधन को प्रयोगबाट अलग रहनु पर्छ - प्रसाधन सामग्री मा विभिन्न रासायनिक पदार्थहरु नाजुक छाला मा प्रतिकूल प्रभाव पैदा गर्दछ।
दोस्रो, तपाइँ छालाको देखभाल गर्न र छाला मर्मतको गति बढाउन बडी लोशन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर कुनै अतिरिक्त कार्यहरू बिना इम्ल्सन छनौट गर्न ध्यान दिनुहोस्, जस्तै केवल मॉइस्चराइजिंग वा एलोवेरा जेल।
अन्तमा, एक्सफोलिएसन नगर्नुहोस् र सूर्य सुरक्षामा ध्यान दिनुहोस्।
के म मेरो दाह्रीको लागि कपाल हटाउने उपकरण प्रयोग गर्न सक्छु?
केही केटीहरूको दाह्री जस्तो कुरो तिनीहरूका मुखका कुनामा हुन्छन्, तर दाह्रीमा हुर्केका यी कपालहरू वास्तवमा दाह्री हुदैनन्। यी कपालहरु शरीरका अन्य अंगहरु भन्दा फरक छैनन्, त्यसैले तपाई कपाल हटाउनका लागि कपाल हटाउने उपकरण प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तर यो पुरुष दाह्रीको लागि फरक छ।
सर्वप्रथम, यो निश्चित छ कि कपाल हटाउने उपकरणले केटाहरूको दाह्री हटाउन सक्छ, तर हामी केटाहरूलाई सिफारिस गर्दैनौं। केटको दाह्री अवस्थित छ किनकि केटको दाह्री नरको चिन्ह हो, र दोस्रो सेक्सको रूपमा पनि चिनिन्छ, जुन पुरुष हार्मोनमा आधारित छ। तर केवल कपाल हटाउन बारम्बार कपाल हटाउने उपकरण प्रयोग गर्नाले वास्तवमा दाह्री हटाउनेको प्रभाव हुँदैन (किनकि केटाहरूको नर हार्मोन निरन्तर स्रावित हुन्छ, त्यसैले दाह्री सधैं बढ्नेछ)। केश निकाल्ने उपकरणको प्रयोग केटाले दाढी हटाउनको कामको खास प्रभाव हुँदैन आफैंमा अनावश्यक समस्या थपेको बाहेक। ।
फोटोन कपाल हटाउने उपकरणको अपरेटि principle सिद्धान्त।
फोटोन कपाल हटाउने उपकरणलाई आईपीएल फोटोन कपाल हटाउने उपकरण पनि भनिन्छ।
वर्तमानमा, प्रायः घरको कपाल हटाउने उपकरणहरूले आईपीएल तीव्र प्रकाश पल्स टेक्नोलोजी प्रयोग गर्दछ।
आईपीएल गहन पल्स प्रकाश विशेष तरंग दैर्ध्य संग एक व्यापक स्पेक्ट्रम दृश्य प्रकाश हो, जो एक नरम फोटोथर्मल प्रभाव छ। अवैध वा हानिकारक तरंगदैर्ध्य फिल्टर गर्न उपकरण एक फिल्टर प्रयोग गर्दछ, तरंगदैर्ध्य सामान्यतया 475-1200nm हो। सामान्य घर कपाल हटाउने यन्त्रको फिल्टर तरंगदैर्ध्य सामान्यतया 550०--650०nm बीचमा हुन्छ, र यहाँ तरंगदैर्ध्य सुरक्षित कपाल हटाउने दायरामा पर्दछ, र प्रभाव अपेक्षाकृत महत्त्वपूर्ण छ।
कपाल हटाउने सिद्धान्त जैविक ऊतकहरूमा प्रकाशको छनौट थर्मल प्रभाव प्रयोग गर्नु हो। कपालको फोलिकल्स र हेयर शाफ्टमा रहेको मेलानिनले चुनिंदा स्पेक्ट्रममा उर्जा ग्रहण गर्दछ, प्रकाशको उर्जालाई तातो ऊर्जामा रूपान्तरण गर्दछ, र तापक्रम तीव्र रूपमा बढ्दछ भने कपालको फोलिकल टिशूहरू नष्ट गर्दछ। ताकि कपाल हटाउने उद्देश्य प्राप्त गर्न।
के त्यहाँ फोटोन कपाल हटाउने उपकरणको कुनै साइड इफेक्टहरू छन्?
घर प्रयोग कपाल हटाउने उपकरणहरु सामान्यतया आईपीएल फोटोन टेक्नोलोजी प्रयोग गर्दछ। फिलिप्सले यो प्रविधि सब भन्दा पहिले कपाल हटाउने उपकरण उत्पादनहरूमा प्रयोग गरेको थियो। दशकौं बजार परीक्षण पछि, कुनै प्रतिकूल साइड इफेक्ट फेला परेन। स्थानीय छाला प्रयोग पछि थोरै रातो देखिन सक्छ। किनकि कपालका फोलिकल्स वरिपरि छाला चिढचिढिएको हुन्छ र आफै मर्मत गर्नु आवश्यक छ। केवल मॉइस्चराइजिंगमा ध्यान दिनुहोस् र सूर्यको प्रकाशबाट बच्नुहोस्। यसले कुनै हानिकारक साइड इफेक्टको कारण गर्दैन।
यसको विपरित, आईपीएल फोटोन कपाल हटाउने टेक्नोलोजीले छाला कोलेजेन पुनर्जन्म र पुन: व्यवस्थालाई बढावा दिन डर्मिस लेयरमा कोलाजेन फाइबर र लोचिक फाइबरको आणविक संरचनामा परिवर्तन ल्याउन सक्छ। त्यसो भए यसले छिद्रहरु लाई कम गर्न र pores लाई कम गर्न को प्रभाव प्राप्त गर्न सक्छ।
तसर्थ यदि तपाईं खाँचोमा हुनुहुन्छ भने, कपाल हटाउने उपकरणको साइड इफेक्टको बारेमा चिन्ता नलिनुहोस्, र हिम्मतका साथ यसको प्रयास गर्नुहोस्।
अघिल्लो: अनावश्यक कपालको समस्याबाट कसरी छुटकारा पाउने? बाक्लो शरीरको कपाल भएको केटी आउँनुहोस् र हेर्नुहोस्
अर्को: आईपीएल कपाल हटाउन घर को उपयोग को रहस्य （दुई）